Ukuqeqeshwa Okufanelekayo Kwinguquko Yenkampani Yakho Yenkampani | ITS
Ukuqeqeshwa okufanelekayo ekushintsheni kweDivaysi yakho
Thatha i-gander cishe noma yiliphi ibhizinisi kulo mzuzu, futhi uzobona izinkomba zokuguqulwa kwe-digital. Yibize inkinga evamile kusukela ezinhlanganweni eziningi namuhla ziyazi ukuthi kuyadingeka ukuthi ujoyine izindlela ze-digital kumisebenzi yansuku zonke nokusebenza kwesikhathi eside.
Njengephayona kwezobuchwepheshe ukulungiselela isikhala, sidinga ukwenza lula ukuhlukumeza kwalabo abathuthukayo futhi kuhamba kumakhasimende ethu. Yingakho siqhubeka sicabangela izindlela zokulungiselela ukutholakala okulula futhi okulula ukuze sidle. Enye indlela yinye isimo sokulungiselela sokucela: I-Digital Learning. Lokhu kubalulekile ngenxa yokuthi asikhiphi inani elikhulu lempahla nje ukuze sibonakalise ukuthi kunjani manje emakethe. Esikhundleni salokho, sizama ukudala ukuxhuma ngezinto ezisezindaweni eziphezulu lapho sibona imbobo emakethe. Lokhu kuvumela izinhlangano ukuba zikhethe ukulungiselela amaphuzu kunoma yikuphi ukuthutha okuhlela ukuthi uhloniphe okuhle kakhulu eqenjini elithile kanye nesenzakalo.
Ekugcineni, i-Digital Learning iphathelene nokuletha into engcono kakhulu ukusiza izinhlangano ukuthi zithathe izisebenzi zazo zibe zikhulu kakhulu. Sidinga izidingo zokufunda esikhundleni sokuthenga ubulungu futhi angalokothi sisebenzise. Ukuze sikhuthaze ukufunda, ngaso sonke isikhathi senza abashayeli bezindiza futhi silungiselela ukugxeka ukuze sithuthukise ulwazi lokufunda.
Ukufeza inhloso yethu yokwenza into enhle kakhulu, sitshala amandla amaningi asebenzayo kanye nabaqalayo bokufundisa emisebenzini yangaphambi kokudala ngokuphambene nokumane uhambe esiteji sesigaba.
Isibonelo, ngenkathi ama-slide wezwi-vo angakusiza ukuba ungene embonweni wodwa ngesikhathi esifanayo, sifundile ngocwaningo kanye neklayenti ihlangana ukuthi amaklayenti ethu avame ukufuna okuthile okungaphezu kolwazi olubalulekile ngezihloko. Yingakho sibeka isikhathi esinjalo ekudaleni kwangaphambi kokudala.
Ukuqaphela ukuthi ukufika komfundi ekuphileni komkhaya, ukuziphatha, ukuvuselela, noma ngisho nokusebenza kwansuku zonke kungabamba iqhaza emalini abambayo, ubona ubuhle ekuvumela omunye umuntu ukuba alungiselele uma ekulungele ukudla idatha yamanje. "Ngethuba lokuthi ufunde kancane ngesikhathi futhi ujoyine ukufunda kwakho empilweni yakho yomsebenzi (noma ukuhlolwa!), Ukuthi ukufunda kuyingxenye yalokho okuhlangenwe nakho kwakho nakwezinye izindlela. Uyazi ukuthi kungani ufunda lokho okufundayo, futhi ungakwazi ngaphandle kokulingana okulingene nezicucu ezintsha ngalokho owaziyo ngempela.
Ukufunda kwangempela nokuthuthukiswa kobuchwepheshe yilokho okukhona umqondisi kanye no-understudy abafisayo. Ukuhlala okulele ngeke kube lula ukusiza amakhasimende akho noma osebenza nabo. Okwamanje sibhekene namadijithali okulungiselela ama-portfolio ikakhulukazi kuMicrosoft nokuThuthukiswa koMsebenzi, nokho sinezinye izingqikithi ezinzulu eziqondiswayo ezilinganiseni izindawo ezifana nefu ne-cybersecurity.